भाइकाे शव बाेकेर विदेशबाट फर्किँदा...
मलाई विश्वासभन्दा पनि झट्का लाग्यो। यो कसरी भयो? भाइलाई अस्पतालमा शान्त रूपमा सुतेको देखेर आँखा रसाए। ऊ सामान्य देखिन्थ्यो भने तातै थियो।
नवीन्द्रराज जाेशी जसले नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्र्याए
३० वर्षअघि विद्युतीय गाडी त बजारमै आएका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा भर्खरै काठमाडौं नगरपालिकाको उपमेयर पदमा निर्वाचित भएका स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशी विक्रम टेम्पो विस्थापन गरी स्वच्छ परिवहनको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगे।
सिटामोल ब्युँताउने नवीन्द्र दाइ
नवीन्द्र दाइसँग जनसम्पर्क गर्ने कला पनि बेजोड थियो। राजनीति गर्छु भन्नेसँग हुनुपर्ने पहिलो र अपरिहार्य गुण नै त्यही हो।
रणनीतिक विश्लेषणका प्राधिकारीको प्रस्थान रणनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने क्षमताका राजनीतिशास्त्री ध्रुव कुमारको अवसानले राजनीति र सुरक्षा मामिलाको संयोजनसँगै प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिको अभाव भएको छ।
इतिहास शिरोमणिले झेलेको त्यो आर्थिक सङ्कट बाल्यकालदेखि नै पारिवारिक र आर्थिक सङ्कट झेल्दै आएका इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले जीवनको उत्तरार्द्धमा आँखाको ज्योति गुमाउँदा पनि इतिहासको अन्वेषण गरी ज्ञानको ज्योति फिंजाउन छोडेनन्।
स्नेही अभिभावक कमलप्रकाश बुबाको जागीर खोसिनुका साथै घर लिलामीमा परेपछि आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो। अनि जेठा छोरा कमलप्रकाशले पारिवारिक जिम्मेवारी उठाउँदै टाइपिस्ट क्लर्कको जागीर शुरू गरे।
सम्झनामा पहिलो इतिहास-संशोधक राममणिको देहान्त भएको ५० वर्षसम्म केशवमणिले सम्हालेर राखेको शान्ति निकेतन पुस्तकालयको जिम्मेवारी अब कसले लेला भन्ने खुलदुली मलाई लागिरहेछ।
कमला भसिन : दक्षिणएशियाकी अम्मा! केटीहरू भन्थे, ‘कमला छोरी गुमाएर पीर नगर, हेर त कति छौं तिम्रा छोरीहरू’ तर आज हामीले कमला नै गुमायौं। हाम्रो साझा अम्मा गुमायौं। कमलाले धेरै मानिसको जीवनमा रिक्तता छोडेर गइन्।
प्रिय दानिश, अब कसले सुनाउँछ तिमीले जस्तो कथा–व्यथा ? ऊ मेरो श्रीमतीलाई पनि राम्ररी चिन्थ्यो। सन् २०१३ मा बैंककमा एउटा तालिममा मैले श्रीमतीलाई सँगै लगेको थिएँ, त्यो वेला भर्खरै हाम्रो बिहे भएको थियो। दानिशले हामी दुई जनाको फोटो खिचिदिएको थियाे, सम्झँदा त्यो हिजो जस्तै लाग्छ। तर, अचम्म आज ऊ छैन।
जसले गाए–हेर न हेर कान्छा, जसले रचेँ– यहाँ फूल नखिलेछ! वास्तवमा ‘सङ्गम’बाट नै जितेन्द्र बर्देवाले गीतकारका रूपमा आफ्नो परिचय दिन पाए। पहिलोपल्ट उनको शब्द-रचना र शरण-रञ्जितको सङ्गीत तथा अरुणा लामासँग उनैले गाएको स्वरमा- ‘हेर न हेर कान्छा’, डाँडालाई फूलले ढाक्यो’, ‘देउरालीको पाखामा आज’ र लगत्तै अरुणा लामाको स्वरमा- ‘यहाँ फूल नखिलेछ’ तथा ‘त्यहाँ निश्चल छ जीवन’ भन्ने गीत कलकत्ता गएर एचएमभीमा रेकर्ड गर्ने अवसर पाए।
‘२१औं शताब्दीका अरनिको’ राजकुमार दाइले (राजकुमार शाक्य) ले पूर्वी भुटानको तकिलामा बनाएको गुरु पद्मसम्‍भवको विशाल मूर्ति अहिले प्रख्यात बनेको छ। मूर्ति निर्माणका बेला कालिगडहरूले सम्पूर्ण काम हातैले गरेको देखेपछि भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई. थिन्लेले यसलाई विश्वकै एउटा नमूना हुने भन्दै उहाँको काँध थपथपाउनुभएको थियो।
‘ज्ञानेन्द्रकै कारण नेपालमा खुलेन ओमेगा घडीको उद्योग’
एक दिन साँझ श्री ५ बाट बोलाइबक्स्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ। कुरा चल्दै गयो। राजाबाट हुकुम भयो, “मेरो भाइ– छोराहरूलाई व्यापार गर्नु छ, सबै यिनलाई दिए जनताका छोराहरूले के गर्ने ? मैले एक उद्योग गर भनेर दिएकै छ। अब अरू दिनुपर्दैन। कीर्तिनिधि, नवराजलाई बढी ‘प्रेसर’ भयो, तिमीले भन्दिनू।”
बिर्सिइने छैनन् उज्ज्वल !
महात्मा गान्धी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 'मेरो जीवन नै मेरो सन्देश हो।' राजनीतिमा साध्य मात्र नभएर साधनको पनि शुद्धता, रचनात्मकता, अहिंसा र भाइचारा उज्ज्वलको जीवनको सन्देश हो।
'अझै सुरक्षित छ वीरेन्द्र सुत्ने कोठा'
मैले मो शँ मिशेलस्थित घरमा अझै पनि वीरेन्द्रको सुत्ने कोठा उस्तै अवस्थामा राखिदिएकी छु। भूइँमा रातो गलैंचा छ। उनैले प्रयोग गरेका तख्ता छन्। उनी बसेका कुर्सीहरू कोठामा उस्तै अवस्थामा छन्। उनी आएर परिवारजस्तै भएर बसेकाले म त्यसलाई आफू बाँचुन्जेल बचाउँछु।
के वीरेन्द्र भइदिएका भए नेपालमा अझै राजतन्त्र रहन्थ्यो? आजभन्दा २० वर्षअघि, १९ जेठ २०५८ मा नेपालले अकल्पनिक बीभत्स घटनाको सामना गर्नुपर्‍यो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र राजपरिवारका अन्य आठ सदस्यको राति खाना खाने बेला दरबारभित्रै हत्या भएको थियो ।
एक चेतन, अनेक चेतना आफ्नो जीवनकालमा चेतनले फरक–फरक प्रकृतिका अनेक काम गरे। कहिले माछा विशेषज्ञ बने, सिनेमा बनाए, गीत–कविता–कथा लेखे, शिक्षक बने, सरकारी कर्मचारी भए, कुनै बेला त फूटबल खेलाडी पनि थिए रे। तर, उनलाई सम्झिइने आखिर यही सिर्जनाकै कामले हो।
नवीन्द्रराज जोशी : सधैं सकारात्मक, सधैं सक्रिय नेपालमा खोजिएको राजनीतिकर्मी भनेकै नवीन्द्रराज जोशीजस्तै हो। एक पैसा बेइमानी गर्दैन, इमानदार छ, मिहिनेती छ, जनताप्रति पूरै समर्पित छ र मौका पाउनासाथ परिणाममुखी काम गर्ने हुटहुटी छ।
कृष्णप्रकाशले अनुवाद गर्न नपाएको त्यो लेख कृष्णप्रकाश श्रेष्ठले रुसी भाषामा अनुवाद गर्ने जानकारी दिएपछि एउटा लेखको परिमार्जन थालेको थिएँ। जब १६ चैतमा काम सकेर फेसबुक खोलें, उनको मृत्युको खबर फैलिइसकेको रहेछ।
टेड, जसले नेपाल उत्खननको बाटो देखाए नेपालको इतिहास र पुरात‍त्त्व विधामा टेड रिकार्डीको योगदान ठूलो छ। उहाँले उत्खनन मात्रै गर्नुभएन, भविष्यमा गरिने उत्खननका लागि बाटो पनि देखाइदिनुभएको छ।
‘महान् मानिसको बाटो पछ्याउनु भन्छन्, तर साहित्यमा त्यो काम लाग्दैन’ इबराले चार दशकअघि लेखेको कथा थियो- खीर। “मान्छेको जीवन, जति मिलाउँदा पनि के नमिलेको के नमिलेको जस्तो मीठो खीर पकाएर खाउँभन्दा पनि नसकिने जस्तो” उहाँले जीवनका जटिलभन्दा जटिल रहस्यलाई कति साधारण र सटिक तरिकाले भनिदिनुभयो।
गर्वको जीवन, सन्तुष्ट निधन इन्द्रबहादुर राई सचेत रूपमा पौने शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म संसार देखेर, हेरेर, बुझ्ने प्रयास गरेर, देखे–बुझेका कुरालाई चिन्तनको रापले गालेर र ती कुरा हामीलाई सुनाएर, पढाएर जानुभयो।
सुगम संगीतका सगरमाथा 'सी-माइनर मेरो जिन्दगी' मा अम्बर गुरुङ भन्छन्– नेपालमा संगीत गर्नु भनेको संघर्ष गर्नु हो। संगीतको यो हिमाल चढ्नु बेलाबेला वास्तविक हिमाल चढ्नुभन्दा पनि दुरुह हुन्छ।
यसरी उदाएको थियो 'नौ लाख तारा' यस्ता उत्तरआधुनिक शब्दको गीत लेख्ने अगमसिंह गिरीलाई मान्नुपर्छ । बाइबलमा भनिएको छ: 'प्रारम्भमा शब्द थियो' अगमका शब्दबाट सबै कुरा थालिएको थियो । त्यसपछि आयो अम्बर गुरुङको अद्वितीय सङ्गीत र स्वर। उनी त्यो जग थिए जसमाथि आधुनिक नेपाली सङ्गीत उभियो।